Waxay jeelyihiin in nooca qaylada Low - Shiinaha Ningbo Hicon Industry
Saqafkii Marine qarinaayay gariiradda Fan Unit Hisurp ayaa loogu talagalay taxane kala duwan ee gariiradda Unit Fan si loo xaqiijiyo jawi fasal sare hoos deegaanka badda. From weyn in maraakiibta ganacsiga yar yar, moodooyinka kala duwan ayaa diyaar u ah codsiyada, dherginaya tiro balaadhan oo ah awoodda qaboojinta loo baahan yahay iyo ilaha awooda loo isticmaalo caalamka oo dhan. Tani waxay meesha aqoontooda xirfadeed siinayaa Hisurp darafka hogaaminaya duurka this ee ganacsiga. Tani siman qarinaayay taxane gariiradda taageere ayaa loo sameeyay si ay u ac ...
Saqafkii Marine Unit qarinaayay gariiradda Fan
Hisurp ayaa loogu talagalay taxane kala duwan ee gariiradda Unit Fan si loo xaqiijiyo jawi fasal sare hoos deegaanka badda. From weyn in maraakiibta ganacsiga yar yar, moodooyinka kala duwan ayaa diyaar u ah codsiyada, dherginaya tiro balaadhan oo ah awoodda qaboojinta loo baahan yahay iyo ilaha awooda loo isticmaalo caalamka oo dhan. Tani waxay meesha aqoontooda xirfadeed siinayaa Hisurp darafka hogaaminaya duurka this ee ganacsiga.
Tani siman qarinaayay taxane gariiradda taageere ayaa loo sameeyey si loo gaaro raaxada ugu badnaan qaab tamarta ugu badan ee buuqa si dhib leh si aad u hesho la unugyada caadiga ah terminal hawada (kala, gariiradda taageere). Its qaab u wax soo saarka ugu fiican ee loogu rakibo kasta oo u baahan in la raacayo xeerarka adag ee heerarka qaylada ka dhigaa. Daraasaddu waxay si taxadir ah suppressor Goluhu isku dhafan iyo isticmaalka qalab gaar ah qalabada (dib loo fiber caag) dhawaaq sare awood u dhuuqin.
cimri dherer u fiican si gaar ah loogu talagalay codsiyada badda
design miisaanka Light
kala duwan oo hawlgal Wide
Energy lagu badbaadinayo
qaybo ka beddelid badan hubiyo codsiyada kala duwan
gaadiidka Easy iyo shaqo loo xirxiro
digsiga faleebo ahama la height 25 mm
- All maraakiibta eegin cusub ama jirka
- unugyada yar qol qol iyo engine
Previous: Nooca caadiga ah
Next: Joogtada Floor
Marine Air hagaajiye Fan gariiradda
Marine Fan gariiradda
Marine Fan gariiradda Unit
Marine baakadeeyey Unit Fan gariiradda
Unit Offshore Fan gariiradda
Nooca caadiga ah